sanduuqa wadista dixiriga, sanduuqa qalabka dixiriga, sanduuqa qalabka dixiriga
dixirixiyuhu wuxuu saarayaa qalabka wax lagu xirto
Goorm Gear Set
Qalabyadayada dirxiga dirxi-dixiriga ah waxay soo saaraan xaddiga waxsoosaarka illaa 420Nm iyo moodooyinka badankood waxay wataan ≤30 qaanso-daqiiqado oo falcelin ah. Ma waxaad raadineysaa Aluminium Gooryaanka Geesku?
Boorsada dixiriga yar
Waxaan haynaa kuwayaga xawaaraha lagu rito ee dixiriga si aan wax uga qabano baahiyahaaga. Dhoofinta deg degga ah iyo boorsada dixir tayo leh oo laga qaado gudbinta Torque. Xulo sanduuqa wadata dixiriga saxda ah ee mashruucaaga.
Shirka sanduuqa qalabka dixirida
Xawaareyaasha la gelinayo ee 1000 ama 1500RPM, oo ku saleysan tijaabada nolosha, sagaal xawaare oo xawaare dixir dixiri ah ayaa lagu heli karaa xajmiga xajmiga 26 oo leh saamiga u dhexeeya 5: 1 ilaa 60: 1. xawaaraha gearbox-ka iyo gogosha dixiriga gogosha.
Qalabka Soram-ka ee dirxiga dixiriga ah ee 'Sogears' gear gear gear wuxuu inta badan ku jiraa Aluminium "Aluminium", oo loogu talagalay hal qalab dixiriga ah
qalabka dixirigoodu dixirigoodu gaadho saamaynta xawaaraha sare ee ka socda
3: 1 gearbox sare, waxaan leenahay qiimaha ugu qaalisan ee goynta dixiriga sanduuqa ka soo saaraha, qalabka dixiriga dixiriga yar iyo gear weyn, qalabka dixiriga ee guryaha ku jira waxaa laga sameeyaa Tin (Stannum) Naxaas, noocyo kala duwan oo heer sare ah & qalab dixir gaar ah set, Xaqiiqda Xagasha Tooska ah ee Birta dixiriga dixiriyaha birta ah, Varitron dixiriga dixirigoodu xawaaraha hoos u dhigaha saldhigga taxanaha sannado badan oo waayo-aragnimo ah wuxuu isticmaalaa dusha ilkaha oo loogu talagalay dusha sare ee waxqabadka wareejinta culeyska aan la dhaafi karin.
Bixiye xawaaraha qalabka xawaaraha
Qalabka mashiinka dhoobada ee Worm
Sanduuqa weelka dixiriga ah
Sifooyinka dixirigoodu uu wado
Faa'iido darrada dirxi dirxi waxay la mid tahay gudbinta qalabka kale ee loo yaqaan 'gear gearr' oo iyaguna qaabab ah sida daloolin, xirasho, dhejis ilkaha dushiisa iyo jebinta ilkaha dixiriga. Dhexdooda, daloolinta iyo dixiriga dixiriga dushiisa ilkaha la gashado ayaa ah kuwa ugu caansan. iyo dhejintu sidoo kale way dhacdaa mararka qaarkood. Cilladaha kor ku xusan waxay badanaa dhacaan maxaa yeelay gearbox-ka dixiriga ah ee dirxiga mashiinka leh xawaaraha mootada inta udhaxeysa wejiyada wejiga meeraha waa weyn yahay, gaar ahaan wadnaha dixiriga dixiriga ah, xagalka saliidda ee 8 aad ayuu u yar yahay, filimka cadaadiska firfircoonna lama sameyn karo, si waxtarka gudbinta ayaa hoos udhacaysa marka heerkulku kaco.
Waxaan heysanaa wax kabadan 100 farsamada injineeriyada farsamada naqshadeeye xirfadleyda ugu badan si aan u hubinno inaan ku bixin karno xalka saxda ah ee codsiyada aan la arki karin. Marka laga soo tago noocyada caadiga ah ee sanduuqa qalabka dixiriga, waxaan sidoo kale ku bixin karnaa adeegga loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudahaaga gaarka ah.
Waxaan siineynaa dhammaan shirkadaha warshadaha aqoon aqoon qoto dheer leh iyo dalabyo ujeedo leh oo loo sameeyay qaab loogu talagalay baakadaha gawaarida dixiriga si ay u buuxiyaan shuruudahaaga.
Ujeeddooyinka adeegsadayaasha, Markaad u baahatid xalka gudbinta warshadaha oo dhameystiran, mideysan oo hufan, fadlan noo kaalay;
Ganacsatada, markaad u baahatid soo-saare lagu kalsoonaan karo oo leh tayo wanaagsan iyo adeeg hufan, fadlan noo kaalay.
20 + Sano
Waxqabadka Sare ee Warshadaha badankood, oo leh 'Zero backlash Gear' si loo sameeyo hufnaan sare iyo tayo sare leh si loo yareeyo qiimaha wadistaaga.
Sogears waxay bixisaa adeegyo ballaaran oo adeegyo ah oo loogu talagalay macaamiisha Gudbinta & Qaybinta. Hubi waxyaabahayaga dixiriga dixirigoodu gaar yahay.
Sogears wuxuu siinayaa booska dirayska dixiga oo tayo sare leh, dirxiga dixiriga oo leh matoor, Nolosha oo la wanaajiyey iyo cimri dheereeyey, Kooxdayada adeegga ayaa qorsheyn doonta adeegga ugu sarreeya ee sanduuqa maandooriyaha.
Waxaan haysannaa kooxda iibsashada ugu adag ee ilaaliya tayada ugu sarreeya ee qaybaha sida qaadashada, xirmooyinka saliida, biraha oo leh tayo wanaagsan iyo qiimo tartan.
Waxaan ku faraxsanahay inaan kula soo xiriirno markasta.